कसैलाई पनि अस्पताल जान मनलाग्दैन । अन्य मुलुकमा बिरामी नभए पनि महिनैपिच्छे हेल्थ चेकअपको लागि जालान् तर नेपालमा त्यस्तो छैन । कारण कोही गरिबीको चपेटामा छन् भने कसैलाई व्यस्तताले सताएको
जनताले तिरेको करबाट देशैभरका सडकहरु निर्माण भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा भारी बजेट विकास निर्माणको लागि निकासा गर्छ । त्यही रकमले सडकमा कालोपत्रे हुन्छ । सडक कालोपत्रे
कुनै पनि जीवजन्तु जन्मेपछि उसको मृत्यु निश्चित हुन्छ । तर कहिले, कहाँ र कति बेला मृत्यु हुन्छ ? त्यसको भने कुनै ठेगान हुँदैन । संसारका सबै वस्तु नाशवान् छन् ।
सरकारको लाचारीपनले जनता मारमा
देशैभर सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोग गरी आफ्नो कामकाजमा जाने सर्वसाधारणको संख्या लाखौं छ । सबैले निजी सवारी खरिद गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि सार्वजनिक सवारीको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । उपत्यकामा
देश बनाउन युवाहरुले नै नयाँ भिजन ल्याऔं
पहिलो कुरा त हामीले देशमा रहेको अथाह स्रोतलाई हामी नेपालीको श्रम र पसिना लगानी गरेर आफ्नै सीप र ज्ञानबाट सदुपयोग गरी देशलाई समृद्ध एवं जनतालाई धनी बनाऔं । नेपाललाई विकासशील
स्मार्ट लकडाउनको नाम दिएर कोरोना फैलाइयो
कोरोनाको प्रकोप बाँकी नै रहँदा सरकारले निषेधाज्ञा हटायो । स्पष्टरुपमा भन्नुपर्दा सरकारलाई जनताभन्दा ठुलो कर भयो । निषेधाज्ञा हट्यो । २०७६ चैत ११ गते सरकारले पहिलो लकडाउन लगाएको थियो ।
सरकारी गाडी : राज्यको ढुकुटी सक्ने भरपर्दो माध्यम
सबैलाई थाहा नै भएको कुरा, सबैभन्दा सजिलो जागिर सरकारी जागिर नै हो । काम गरुन्जेल तलब भत्ता दुवै खान पाइने, जागिरबाट रिटायर भइसकेपछि पनि घर बसी खुट्टा पसारेर खान पुग्ने
ट्याक्सीमा भएको दादागिरीको अन्त्य कहिले ?
२०७७ माघको अन्तिम सातासम्म यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको रुपमा गोगनबहादुर हमाल थिए । ट्याक्सीमा भएको सिन्डिकेट तोड्न, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनी टिप्पणी उठाएर यातायात मन्त्रालय पठाउने पनि गोगनबहादुर हमाल
बढी भाडा लिई ठग्ने सवारीलाई कारबाही भएन
उपत्यकामा विभिन्न सडकमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनले दैनिक लाखौं यात्रुलाई बढी भाडा लिएर ठगेका छन् । प्रदेश नं. ३ मा चल्ने सवारीसाधनले आफ्नो मनोमानी गर्दै भाडा असुल्ने गरेका छन् । सार्वजनिक
मानिसका विभिन्न आवश्यकताहरु हुन्छन् । आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न उसले हरेक प्रयत्न गर्दछ । आफ्नो जन्मथलो छोडेर अन्य जिल्लामा जान पनि ऊ तयार हुन्छ । अन्य जिल्लामा आफ्नो घर हुँदैन
नेकपा एमालेमा लामो रस्साकसीपछि भर्खरै माधव नेपाल समूहले नयाँ पार्टी निर्माण गर्न सफल भएको छ । हिजो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अहम्, अराजकता र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिबाट तड्पिएका लाखौँ कम्युनिस्ट–प्रेमी कार्यकर्ताहरुमा
सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड
विश्व एक्काइसौं शताब्दीमा चलिरहेको छ । तर नेपाल पहिले जहाँ थियो अहिले पनि त्यहीँ छ । न सोचविचारमा परिवर्तन आयो, न त नेपालीहरुको मानसिकतामा केही फरक परेको छ । वर्षौंदेखि
जनावरको बाँच्ने अधिकारको रक्षा होस्
हरेक जीवजन्तुले स्वतन्त्ररुपमा बाँच्न पाउँछन् । नेपालमा जति पनि घरपालुवा जनावरहरु छन् तिनीहरुको मालिकले आफ्नो फाइदा होउन्जेल पाल्ने अनि ती जनावरहरुलाई बूढो भएपछि सडकमा लगेर छोड्ने प्रचलन पहिल्यैदेखि नै जारी
नेता, प्रशासन र समाज : को सही, को गलत ?
– रमेशकेशरी वैद्य थाहा छ, सबैलाई अकुत सम्पत्ति भूलभुलैया हो । दुनियाँमा यही गलत अकुत सम्पत्तिको तृष्णाले कतिपय मानिसको जिन्दगी नर्कमय भइराखेको हुन्छ । जस्तै– जेलको हावा, विदेशमा पलायनको जिन्दगी,
भार बनेको संघीयताबारे बहस चलाऔँ
नेपालमा संघीयता थेग्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि भनेर नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत विश्व बैँकलगायत दातृ निकायहरूलाई गुहार्ने काम गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मुलुक हिँडाउने
केही दिनयता उपत्यकाको गल्ली, चोक र सडक किनारामा फोहोरको डंगुर थुप्रिएको छ । बाटोमा फैलिएको फोहोरलाई फैलाउनको लागि कुकुरले झन् सहायता पुप्याइरहेको छ । उपत्यकाको सडकमा हिँडिसक्नु छैन । जताततै
सरकारले बाँचुन्जेल कर लियो, मरेपछि पनि छाडेन
पशुपतिनाथ मन्दिर हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर हो । पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालीहरुको शान पनि हो । बर्सेनि पशुपतिनाथ मन्दिर घुमफिर र दर्शन गर्नको लागि लाखौँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुको आवतजावत हुन्छ ।
सडक–मानवलाई सरकारले कहिले मान्छे गन्ने ?
आर्थिक कमजोर भएका अभिभावकको छोराछोरी खोजेर विद्यालयले विभिन्न छुटको व्यवस्था गरी पढाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति सरकारी स्कुल पढाउने शिक्षक–शिक्षिकामा छैन । हुन त त्यही गरिब जनताले तिरेको करबाट सरकारी स्कुलका शिक्षक–शिक्षिकाले
पछिल्लो केही दिनयता उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर निकै बढ्दो छ । कोरोना संक्रमणको कारण मुत्युदर पनि उकालो लाग्दै गएको छ । उपत्यकाका अस्पतालहरुको आईसीयुहरु भरिएको छन् । गुह मन्त्रालयअन्तर्गत
नैतिक शिक्षा खड्किएको समाज
नैतिक शिक्षाको ज्ञान र प्रयोग बाल्यावस्थाबाट नै हुनुपर्दछ । शिक्षाको माध्यम अनि त्यसको उचित प्रयोगबाट हरेक व्यक्तिले आफूलाई सक्षम बनाउन सक्दछ । नैतिक शब्दको अर्थ नीतिहरुको पालन गर्नु हो ।